Vaovao Mafana · Septambra, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Septambra, 2015
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Septambra, 2015
Amerika Latina 30 Septambra 2015
Eoropa Afovoany & Atsinanana 15 Septambra 2015
Eoropa Afovoany & Atsinanana 12 Septambra 2015
Nanapa-kevitra ny Apple hanaja ny lalàna rosiana famantarana ny itoeran'ny raki-tahiry ary nanofa habaka fitehirizana raki-tahiry iray miorina ao Rosia, hoy ny fampitam-baovao ao an-toerana.
Amerika Latina 11 Septambra 2015
Eoropa Afovoany & Atsinanana 10 Septambra 2015
Misy tadiom-bovoka goavana manavatsava ny ilany andrefana amin'i Afovoany Atsinanana omaly sy anio. Indreto ny sary sasantsasany nifampizarana mampiseho ny vaikany
Voalaza Fa Maty Ilay Reninà Palestiniana Zaza Menavava Maty May Nandritry Ny Fanafihan'ny Voanjo Tao Cisjordanie
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 08 Septambra 2015
Maty noho ny ratra nateraky ny fanafihana fandoroana nanjo ny tranony nataon'ireo voanjo Israeliana tamin'ny 31 Jolay i Riham Dawabsheh. Maty nandritra ilay fanafihana i Ali, zanany lahy 18 volana , niteraka hatezerana tany amin'ilay faritra bodoin'i Israely.
Nibodo Ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana Ireo Mpikatroka Libaney “Maimbo Ianareo”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 04 Septambra 2015
Mpanao fihetsiketsehana Libaney 50 eo ho eo avy amin'ny hetsika "Maimbo ianareo" sy ny hetsika hafa tamin'ny Talata teo no nanambara fibodoana misokatra ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana, ora vitsivitsy alohan'ny ifaranan'ny fe-potoana 72 ora nomen'ireo mpanao fihetsiketsehana hamaliana ny fitakian'izy ireo.
Niala ny filoha Goatemalteka rehefa nivoaka ny didy fampisamborana
Amerika Latina 04 Septambra 2015
Rehefa niala teo amin'ny toerana maha-filohan'i Goatemalà azy i Otto Pérez Molina dia nitolo-tena teo amin'ny fitsarana ary nalefan'ny mpitsara tany amponja mandrapivoaka ny fehinteny manaporofo ny anjara andraikiny amin'ny kolikolim-padintseranana aminà tapitrisa dolara